महामारीमा ह्वात्तै बढ्यो फेरि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य — Sanchar Kendra
महामारीमा ह्वात्तै बढ्यो फेरि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य
कोरोना महामारीका बीच दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र निषेधाज्ञाको मौका छोप्दै उद्योगी, ठूला व्यापारी, र बिचौलियाहरूले चामल, तेल, दाल, गेडागुडी, चिनी र अण्डालगायत खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।
निषेधाज्ञाका कारण महामारीसँग लड्दै गरेका उपभोक्ताहरूको आम्दानीसमेत घटेको अवस्थामा अनेक बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने काम ठूला व्यापारीहरूबाट भइरहेको छ ।
खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारीअनुसार निषेधाज्ञा शुरू हुनुभन्दा अघि प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँ मूल्य रहेको मसुरोको दालको मूल्य यति बेला प्रतिकिलो १ सय २२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
मासको दालमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँले वृद्धि हुँदै १ सय ६५ बाट १ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । १ सय १० रुपैयाँ किलो रहेको चनाको मूल्यमा २५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, हरेक ब्रान्डको चामलमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको संघले बताएको छ । यतिबेला मूल्य बढाउनुपर्ने त्यस्तो खास कारण केही नभए पनि केही सीमित व्यापारी र बिचौलियाहरूले राजनीतिक तरलता र निषेधाज्ञाको बहानामा मूल्य बढाएको हुनसक्ने संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्रमान वज्राचार्यले बताए ।
उनका अनुसार खाद्य वस्तुको व्यापारमा कालो बजारी मौलाएको छ । ‘यो समस्या न सरकारलाई हेर्ने फुर्सद छ न त नियामक निकायलाई यससम्बन्धी कुनै चासो छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने ।
यही मौकामा थोक व्यापारीहरूले खुद्रा व्यापारीलाई सही मूल्यको बीलबीजक नदिने समस्या पनि उत्तिकै बढेको उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
नीशाको त्यो दुर्घटना जसले अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी गरायो
खुकुलो बनाईदै निषेधाज्ञा, असार १ गतेबाट लागु हुदैछ यस्तो नयाँ नियम
दु’र्व्यवहारमा परेका राउटे युवतीको ज्यान जोखिममा छ- मानवअधिकार आयोग
माओवादीलाई समेटर फेरि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै ओली, कसलाई आयो गृहमन्त्री बन्ने अफर ?
सरकारी गाडी लिएर ‘डेटिङ’मा स्वयम्भू पुग्ने व्यक्तिको परिचय खुल्यो, को हुन् उनि ?
काठमाडाैं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण बन्द हुँदै, यस्तो छ कारण
कोरोनाबिरुद्ध लड्न बेसार, भिटामिन डी लगायतका औषधिको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! देखियो यस्तो समस्या